Isoftware-Ubunlog | Ubunlog (Iphepha 4)
Ukuphicothwa kwe-2.3.1 kukhutshiwe, ngeli xesha kukwakho neLinux
Ukuphicothwa kwe-2.3.1 ngoku kuyafumaneka ukukhutshelwa koovimba bayo. Kukhutshwa okukhoyo kwiLinux.
Inguqulelo entsha ye-xf86-ividiyo-amdgpu 19.0.0 yeza abaqhubi
Inguqulelo entsha yomqhubi wasimahla X.org 86-ividiyo-amdgpu sele ikhutshiwe kuhlobo lwayo lwamva nje lwe-19.0.0, eyi…
IFirefox iza kudla i-RAM encinci xa ilungisa ibug ebikwe kwiminyaka esi-8 eyadlulayo
IFirefox iza kudla i-RAM encinci kwakamsinya emva kokulungisa ibug eyaxelwa kwiminyaka esi-8 eyadlulayo. Ngoku ungazama inguqulelo entsha.
IWesterosCraft: iseva yeMinecraft ezinikele ekubuyiseleni umdlalo weTrone
Kwithuba elidlulileyo sikuxelele malunga neMinetest eyimithombo evulekileyo nevulelekileyo yeMinecraft….
Isibane-Inkonzo yeVPN yasimahla ye-Cross-Platform
Isibane sisixhobo sasimahla, esivulekileyo se-intanethi sokudlula kusetyenziswa isixhobo sokukhangela kwiwebhu. Sebenzisa isibane unga ...
Ixesha lokutya: ixesha elilula le-Ubuntu elifumaneka njenge-Snap
Kule nqaku siza kuthetha ngeTeatime, ixesha elilula le-Ubuntu eliza kusivumela ukuba silawule ixesha lawo nawuphi na umsebenzi.
I-GNU Octave, indawo evulekileyo engenye iMatLab
I-GNU Octave lulwimi olutolikwa kwinqanaba eliphezulu, ikakhulu ejolise kubalo lwamanani kwaye ithathwa njengelingalinganiyo simahla iMATLAB
musikCube: isidlali somculo esingamaqonga amaninzi kwisiphelo sakho
I-musikCube yinjineli yeaudio esekwe kwisiphelo sendlela, ilayibrari, umdlali obhalwe c ++. Ngamaqonga amaninzi, kwaye inokuba ...
Inguqulelo entsha ye-Midori 8 web browser isungulwe
Ukuqaliswa kwesikhangeli sewebhu esingasasebenziyo iMidori 8 kuye kwabhengezwa, okuphuhliswa ngabathathi-nxaxheba beprojekthi ...
Inguqulelo entsha yeWireshark 3.0.0 ifika ngonxibelelwano olutsha kwi-QT nangaphezulu
Eyaziwa njenge-Ethereal, sisicazululi senkqubo yenethiwekhi yasimahla. IWireshark isetyenziselwa uhlalutyo lwenethiwekhi kunye nesisombululo, kuba ...
IFirefox 65.0.2 ngoku iyafumaneka ngaphandle kotshintsho olukhulu kwiLinux
IMozilla ikhuphe iFirefox 65.0.2 yeLinux, iMacOS kunye neWindows, kodwa abo baya kulonwabela olona tshintsho luza kuba ngabasebenzisi benkqubo kaMicrosoft.
Vula iDrayivu umxhasi wokuvumelanisa ngeGoogle Drayivu
Vula iDrive ngumthengi we-GUI kwiGoogle Drayivu ebhalwe kwi-electron evumela ukwenza izinto ezininzi ngokugcina ilifu likaGoogle
I-Thunderbird 60.5.2 ibandakanya inkxaso ye-UTF-8 ye MAPISendMail
IMozilla Thunderbird 60.5.2 ngoku iyafumaneka ukukhutshelwa kunye nokufakwa, ukulungisa iibhugi ezinjenge-imeyile ye-Outlook.
I-Resilio Sync isisombululo sokugcina ilifu se-P2P
I-Resilio Sync xa ibizwa ngokuba yi-BitTorrent Sync, le software ikuvumela ukuba ugqithise iifayile phakathi kwezixhobo kwinethiwekhi yakho, ngaphandle komlamli, ke ...
I-MySQL Workbench imeko yemizobo yokusebenza ne-MySQL
I-MySQL Workbench yindawo yemizobo yokusebenza kunye neenkcukacha ze-MySQL kunye neeseva. Iphuhlisiwe kwaye yahanjiswa yiOracle Corporation ...
Ingxoxo: umxhasi we-IRC ukulungele ukubuza imibuzo
Ukudibana ngumthengi we-IRC we KDE esinokuthi sincokole ngayo njengoko sihlala sinayo. Iyafumaneka njengephakheji ye-Snap.
I-Linux MultiMedia Studio sisicelo sokuyila umculo
I-Linux MultiMedia Studio okanye eyaziwa ngcono njenge-LMMS sisoftware yasimahla yesoftware yedijithali (ene ...
I-NVIDIA 418.43 ifika, ziimpawu zayo kunye nokufakwa
Kutshanje i-NVIDIA yazisa ngohlobo lokuqala lwesebe elitsha elizinzileyo lomqhubi wemizobo we-NVIDIA 418.43 kwaye kwangaxeshanye uhlaziyo ...
Fmit, isicelo sokulungisa izixhobo zomculo
I-Fmit (i-Tuner ye-Music Instrument Tuner) yinto efanelekileyo yokubonisa izixhobo zomculo kunye namandla exesha, imbali yempazamo kunye nokunye ...
I-WhatsDesk, ingxelo kaWhatsApp esiya kuyifumana njengephakheji ye-Snap
Zininzi iinguqulelo ezikhoyo zokusebenzisa iWebhu yeWhatsApp kwaye namhlanje siza kuthetha ngeWhatsDesk, ukhetho olufumanekayo njengephakheji ye-Snap.
IiGambas IDE imeko yophuhliso lweGambas engenye indlela yokuSisiseko esiBonakalayo
IiGambas yimeko yophuhliso (kunye nolwimi lwenkqubo) yeenkqubo zeLinux kunye neUnix. Sebenzisa ulwimi lwenkqubo yesiko ...
I-digiKam 6.0.0 iyayazi imisebenzi yayo kunye nendlela yokuyifaka ku-Ubuntu
I-digiKam sisimahla kunye nomthombo ovulekileyo womququzeleli womfanekiso kunye nomhleli wetag obhalwe kwi-C ++ usebenzisa izicelo ze KDE, iyasebenza
I-Kodi 18.1 Leia ngoku iyafumaneka. Uhlala uyigcina ihlaziywa njani
Ukuba ufuna ukuba nenkqubo ye-Kodi yemultimedia edumileyo ihlale ihlaziywa, kweli nqaku siza kukubonisa indlela yokwenza ngendlela elula.
Uyifaka njani iShutter kwi-Ubuntu 18.10 ngokugcina
I-Canonical isusile isixhobo se-Shutter skrini kwisixhobo sayo kwaye apha sikubonisa ukuba usifaka njani kwi-Ubuntu 18.10.
I-AceStream: uyifaka njani Ubuntu ukuze uvelise kwakhona amakhonkco akho
Kule tutorial siza kukufundisa indlela yokufaka i-AceStream kwi-Ubuntu ngendlela ekhawulezayo, ekhuselekileyo nelula ukuze ukonwabele amakhonkco ayo.
Inguqulelo entsha yePale Moon 28.4 isikhangeli sele ikhutshiwe
IPale Moon sisikhangeli sewebhu esivulekileyo esigxininisa ekwenzeni ngokwezifiso, sineenguqulelo ezisemthethweni zeMicrosoft Windows kunye neLinux
Uyibona njani iMovistar + e-Ubuntu ngaphandle kokufa kumzamo
IMovistar ayisivumeli ukuba siyibone inkonzo yayo yeMovistar + ukuba asisebenzisi usetyenziso olusemthethweni okanye iSilverlight yeMicrosoft, kodwa kwesi sifundo siza kukubonisa indlela yokuyibona ku-Ubuntu.
Iziphumo zePulse: uyifaka njani kwaye uyonwabele Ubuntu 18.10
Ukuba ungumsebenzisi weRhythmbox okanye enye isoftware yeaudiyo kwaye uphoswa kukulingana, ngena kwaye sikubonise ukuba uyifaka njani iPulseEffects ku-Ubuntu 18.10.
IDoom Slade3: umhleli weqonga lomnqamlezo
I-SLADE3 ngumhleli wangoku wemidlalo esekwe kwiinjini zeDoom kunye namazibuko emithombo. Iyakwazi ukujonga, ukuguqula nokubhala iifomathi ezininzi
IGigolo, inkqubo yokumisela iinkqubo zeefayile zasekhaya nezikude
IGigolo ujongano lokulawula ngokulula unxibelelwano kwiifayile zasekhaya kunye nakwiifayile ezikude zisebenzisa i-GIO / GVfs, oku kukuvumela ukuba uqhagamshele ...
Ungayimamela njani inkonzo yomculo iApple Music ku-Ubuntu
Kule posi sikubonisa ukuba umamela njani iApple Music ku-Ubuntu okanye nayiphi na enye inkqubo yokusebenza yedesktop kwaye, kwixa elizayo, iselfowuni.
I-DevedeNG sisixhobo sokwenza iiCD zevidiyo kunye neeDVD
IDevedeNG yinkqubo yokudala iiDVD kunye neeCD zeVidiyo (VCD, sVCD okanye CVD), ezilungele abadlali basekhaya, kulo naliphi na inani ...
I-Able2Extract Professional isixhobo sokusayina i-PDF kunye nokunye
I-Able2Extract sisisombululo esiguqukayo sePDF esihambelana neMac, Windows kunye neLinux. Ivumela abasebenzisi ukuhlela iifayile zePDF kunye nokuguqula
I-Phoronix Test Suite isixhobo seBenchmark yomnqamlezo
I-Phoronix Test Suite ngumthombo ovulekileyo wovavanyo oluzenzekelayo kunye nesixhobo sovavanyo. Ingasetyenziselwa ukuthelekisa ukusebenza kwekhompyuter yakho
Monitorix, isixhobo sokujonga inkqubo
Imonitorix sisimahla, ngumthombo ovulekileyo, isixhobo esingasasebenziyo sokujonga inkqubo esilelwe ukujonga iinkonzo kunye nezixhobo ezininzi ...
UXwebhu lweSiseko luyakuvuyela ukwazisa ngolu hlobo lutsha, le nguqulo iphuculwe ngokupheleleyo kwaye iyahambelana ...
I-ThetaPad, iqonga lomnqamlezo kunye nesicelo sokuthatha inqaku kwi-Intanethi
I-ThetaPad sisicelo sanamhlanje esinqamlezileyo sokuthatha amanqaku esisebenza njengesicelo solawulo lwedatha esisebenzayo
Faka ingxelo entsha ye-Inkscape 0.92.4 kwi-Ubuntu nakwiziphumo
I-Inkscape ngumgangatho wobuchwephesha bemizobo yesoftware ebaleka kwiWindows, iMac OS X, kunye neGNU / Linux. Isetyenziswa ziingcali ...
I-GCompris isoftware ekumgangatho ophezulu yemfundo yabantwana
I-GCompris yinkqubo yekhompyuter efundisayo enemisebenzi eyahlukeneyo yabantwana abaphakathi kweminyaka emi-2 ukuya kweli-10 ubudala.Iminye imisebenzi ifana nemidlalo yevidiyo
Isalathiso seYouTube, isixhobo esigqwesileyo sokukhuphela iividiyo zikaYouTube
Isalathiso seYouTube sisicelo esikuvumela ukuba ukhuphele iividiyo zeYouTube ngefestile yeapplet kwiphaneli yendalo ku-Ubuntu.
IPuddletag, umhleli wethegi yomsindo weLinux
I-Puddletag engumhleli wethegi yeefayile yeaudiyo yeLinux, efanayo ne-Mp3tag (inkqubo yeWindows). Zonke izinto ...
IMusixMatch, usetyenziso ukuze ubone amazwi eengoma zakho ku-Ubuntu
I-MusiXmatch yenye yezona zicelo zithandwayo ngaphakathi kwe-Android, njengoko yaziwa njengeyona ndawo 'inkulu kakhulu yengoma yeengoma emhlabeni'.
Ubuntu Yenza izixhobo zoPhuculo zonke-in-nye izixhobo zophuhliso
Ubuntu Yenza izixhobo zoPhuculo sisixhobo somthombo ovulekileyo esivumela abasebenzisi ukuba bafake ngokulula ...
I-Simplenote, isicelo sokuthatha inqaku lomnqamlezo
ISimplenote sisicelo sokuthatha amanqaku eLinux kunye namanye amaqonga (Windows, Mac, iOS kunye ne-Android) aphuhliswe yiAutomattic eyinkampani enye
IWireshark, isicelo sokubanjwa kunye nohlalutyo lweepakethi kwinethiwekhi
Le nkqubo ine-interface ekulula ukuyisebenzisa enokusinceda ukuba sitolike idatha yamakhulu eprotocol kuzo zonke iintlobo ezahlukeneyo ...
Iziko losasazo laseMovian enye indlela ebalaseleyo kwiRhafu
Ukuba ujonga ukhetho olufanelekileyo lokudlala umxholo wemultimedia kwikhompyuter yakho kwaye ukhetha ukunqanda ...
ICinelerra, umhleli obalaseleyo wevidiyo kuBuntu
ICinelerra sisicelo somthombo sasimahla nesivulekileyo sokuhlelwa kwevidiyo, inesakhono sokuphinda ubeke iifoto kwaye ivumele ukungeniswa ngokuthe ngqo
Inguqulelo entsha yeVirtualBox 6.0.2 yongeza ukulungiswa kwe-bug kunye nokunye
Kule nguqulo intsha, izilungiso zenziwe kunxibelelwano lomsebenzisi kunye nefestile entsha yokwenza idiski ebonakalayo ebonakalayo
Uyifaka njani iOfisi yeWPS yeOfisi ku-Ubuntu nakwiziphumo?
IOfisi yeWPS yindawo yemveliso yeofisi. IOfisi yeWPS, kubandakanya uMlobi, iPrezishini kunye neSpredishithi, yindawo efanelekileyo yeofisi,
Isiphawuli, ukuba omnye umhleli weLinux Markdown kuphuhliso
Kule meko, namhlanje siza kudibana noMarker, ongomnye wabo baninzi abahleli beMarkdown yomthombo ovulekileyo kunye novulekileyo, eyenzelwe kwi-GTK3
ILibreCad, esisicelo esivulekileyo somthombo woyilo lweCAD
I-LibreCAD yindawo yasimahla, evulekileyo yomthombo we-CAD (uyilo oluncedisiweyo lwekhompyuter) yoyilo lwe-2D. I-LibreCAD yaphuhliswa ukusuka
I-VariCAD, iplatifomu enqamlezileyo yesicelo se-3D / 2D
I-VariCAD sisicelo esiphambeneyo se-3D / 2D yobunjineli boomatshini be-CAD ngezixhobo ezininzi ze-3D kunye ne-2D yokuzoba imodeli.
Ora, umsebenzi obalaseleyo kunye nomphathi womsebenzi
I-Ora ngumsebenzi obalaseleyo osekwe kwilifu kunye nesicelo solawulo lweprojekthi. Esi sicelo siyilelwe ...
Uyifaka njani i-HandBrake video converter kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
I-Handbrake's Transcoder sisimahla, ngumthombo ovulekileyo, isisombululo seqonga lokuguqula iifayile zeendaba eziqhelekileyo zisuka ...
Uyifaka njani iBlender 3D ku-Ubuntu kunye neziphumo?
I-Blender yinkqubo yeplatform eninzi, enikezelwe ngokukodwa kwimodeli, ukukhanya, ukunikezela, oopopayi kunye nokwenza imifanekiso emacala mithathu. Ukwenziwa ...
I-LeoCAD, isicelo sokwenza kunye noyilo lweemodeli zakho zeLego
I-LeoCAD sisicelo esisebenziseka lula se-3D esisetyenziselwa ukwenza iimodeli ezibonakalayo nge-LEGO® ...
IMakeResolveDeb yenza kube lula ukufaka iDaVinci Resolve
Uninzi lweengcali kwicandelo lokumamela ziyafika kule minyaka idlulayo ziye kwiDaVinci Resolve, eyiplatform (Windows, ...
IPragha Media Player, isidlali somculo esinamandla esilula
IPragha sisidlali somculo esilula kakhulu nesikhawulezayo esinemisebenzi eyimfuneko yomsebenzisi ...
I-OpenToonz, usetyenziso apho iBatman Ninja yayidlamkile
Kunyaka ophelileyo bekukho ukumiliselwa kwemuvi bhanyabhanya kaBatman "Batman Ninja" eveliswe ngu ...
Uyifaka njani iPlex Media Server kwi-Ubuntu 18.10 kunye neziphumo?
Xa kuziwa ekulawuleni imithombo yeendaba kwiLinux, kukho iindlela ezininzi ezahlukeneyo ezinje ngezixhobo zolawulo lwemithombo yeendaba ezinje ...
Uyifaka njani indawo ka-Trinity Desktop kwi-Ubuntu?
Imeko-bume ye-Trinity Desktop (TDE) yifolokhwe ye KDE 3.5, injongo yeprojekthi kukukhulula izilungiso ...
I-eDEX-UI, jika isikrini sakho sokuchukumisa sibe kwidesktop yexesha elizayo
Abaphuhlisi banamhlanje bayazigqwetha ngokubonelela abasebenzisi ngeendawo zokuzoba ezingakumbi ...
Inguqulelo yokuqala ezinzileyo yeSyncthing 1.0.0 ifika
I-Syncthing ngumthombo wasimahla, ovulekileyo kunye nesicelo seplatform esivumela umbutho wokuvumelanisa ngokuzenzekelayo kwe ...
Inguqulelo yokuqala ezinzile yeOtter Browser 1.0 ikhutshwa
Emva kwexesha elide lophuhliso, ingxelo yokuqala ezinzileyo yeOtter web browser (1.0) iyaboniswa, eyi ...
Iipakethe ezili-10 eziphezulu ze-2018
Abaphuhlisi be-Ubuntu balungiselele udidi lweyona midlalo iphambili yomdla kunye neyaziwayo ethandwayo eboniswe kwikhathalogu ye-Snap Store.
UMidori, isikhangeli sewebhu esilula kodwa esinamandla
UMidori sisikhangeli sewebhu esingasindi kodwa esinamandla esisebenzisa i-GTK njengombonakalo womzobo ukuze siqhutywe ngaphandle ...
Iphasiwedi yeJumble isicelo sokwenza iipassword ku-Ubuntu
Iphasiwedi yeJumble yinto esekwe kwi-elektroniki onokuyisebenzisa ukwenza indibaniselwano yegama eligqithisiweyo kunye nomhla wokuzalwa negama lakho ...
I-OpenBoard, ibhodi emhlophe esebenzayo xa kusenziwa iinjongo zemfundo
I-OpenBoard isimahla, imithombo evulekileyo kunye nesoftware yeplatform eninzi (kukho iinguqulelo zeWindows, iApple kunye neLinux) yeebhodi ezimhlophe ezisebenzisanayo ...
ISuperTux, umdlalo wevidiyo evulekileyo ophefumlelwe yiSuper Mario
ISuperTux ngumdlalo weqonga we-2D wevidiyo ophefumlelwe kakhulu yiNintendo's Super Mario. Yisoftware yasimahla. Yaphuhliswa…
I-Bookworm, i-eBook esemagqabini kunye nomfundi ohlekisayo woBuntu kunye neziphumo
Ukuba ujonga incwadi ye-elektroniki okanye usetyenziso ukujonga ii-comics zakho, unokukhetha ...
Fre: ac - isiguquli esiguqukayo somgangatho weqonga
Fre: ac sisicelo esigqibeleleyo esiza kusinceda kumsebenzi wokuguqula iifayile zethu zomsindo zibe yiMP3, MP4 / M4A, WMA, Ogg Vorbis nokunye ...
Ngaphandle kwamathandabuzo omnye wemisebenzi eqhelekileyo kuyo nayiphi na ifowuni, ikhompyuter, iThebhulethi kunye nezinye izixhobo zombane ezizisebenzisela wena, ...
UPithos umxhasi wenkonzo yokusasaza umculo kaPandora
Bambalwa kakhulu kuni abazokwazi okanye beve ngePandora. Le yenye yeenkonzo zomculo ezithandwayo kakhulu ...
Inguqulelo entsha ye-DDRescue-GUI v2.0.1 ifika
I-DDRescue-GUI yindlela elula yokusebenzisa i-Ddrescue interface, ebhalwe ngu-Antonio Díaz Díaz, esi sisicelo seplatform ezininzi ...
I-Kdenlive-Umhleli wevidiyo ongekho kumgca ogqwesileyo we-Ubuntu kunye neziphumo
I-Kdenlive (Umhleli wevidiyo ye-KDE engekho-Umgca) ngumhleli wevidiyo ongekho kumgca ophuhliselwe indawo ye KDE desktop, esekwe ...
I-MicroK8 sisixhobo sokuhambisa iiKubernetes kwimizuzwana
ICanonical kutshanje ibhengeze ukumiliselwa kweMicroK8s ebonelela ngendlela ekhawulezayo nenempumelelo yokuhambisa iiKubernetes ...
uGet umphathi obalaseleyo wokukhuphela
UGet ngumphathi wokukhuphela umthombo ovulekileyo weLinux, iya kukhuphela iifayile zakho ngokukhawuleza ...
I-Subsonic: iseva yemithombo yeendaba esasazekayo kwinkqubo yakho
I-Subsonic iseva yemithombo yeendaba esekwe kwiwebhu ebhalwe ngolwimi lwenkqubo yeJava, ukuze iqhubeke nakweyiphi na inkqubo ....
Ungaqwalasela njani izinto ezimbini kwi-SSH ku-Ubuntu?
Ukuqinisekiswa kwezinto ezimbini (2FA) ayisiyonto eyahlukileyo enokusetyenziswa kwimidiya yoluntu okanye kwenye iwebhusayithi. Kulungile lo mlinganiselo ...
Bro: indawo ekhuselekileyo yokhuseleko lomthombo
I-Bro Security Suite yinkqubo enamandla kunye neguquguqukayo yokufumana inethiwekhi kwiLinux. Isebenza ngokusebenza ngasemva, ukuhlalutya
Uyifaka njani iTomcat kwi-Ubuntu nakwiziphumo?
I-Tomcat sisicelo esivulekileyo somncedisi weLinux, Windows, kunye nezinye iinkqubo ezenzelwe ukuqhuba ...
Faka iNFS ku-Ubuntu kwaye wabelane ngeefayile zakho kwinethiwekhi ngale protocol
I-NFS isebenza kwimeko yomncedisi womthengi apho iserver inoxanduva lokulawula ukungqinisisa kwabaxhasi, ugunyaziso kunye nolawulo ...
Khuphela iividiyo zakho ngoncedo lweKhuphela iVidiyo ye4K
Kule nqaku siza kuthetha kancinci malunga ne-4K Video Downloader eyisixhobo esibonisa ukukhuphela iividiyo kunye nevidiyo ...
Ukuthuthuzela: ukhuseleko olugqwesileyo lwenkqubo yakho kunye nezixhobo eziphathwayo
IComodo Antivirus yeLinux (CAVL) ibonelela ngokhuseleko olupheleleyo kwiintsholongwane, iintshulube kunye namahashe eTrojan kwiikhompyuter ezineenkqubo zokusebenza zeLinux.
IfotoFilmStrip: usetyenziso lokwenza iividiyo ezivela kwimifanekiso
IfotoFilmStrip yinkqubo eya kukuvumela ukuba wenze iziqwengana ngemifanekiso kwaye ukongeza, izihlokwana kunye neefayile zomsindo zinokudityaniswa kwindalo
I-Waterfox: Isikhangeli esisekwe kwiFirefox, sigxile kwisantya
I-WaterFox sisikhangeli sewebhu esisekwe kwiFirefox nakwinxalenye enkulu, iyafana xa kufikwa kwinkangeleko kunye neempawu.
Ungayifihla njani ulwazi nge-steganography ku-Ubuntu?
Ngamanye amaxesha kufuneka sibethele idatha eyimfihlo kakhulu kwiinkqubo zethu ukuze kungabikho mntu usebenzisa inkqubo yethu ...
Ungazifaka njani iiKubernetes kwi-Ubuntu nakwiziphumo kwaye wenze iindawo ezimbini?
I-Kubernetes yinkqubo yolawulo lweekhonteyina yasimahla nevulekileyo ebonelela ngeqonga lokuzenzekelayo ...
I-Slack yindawo eyaziwayo kwaye inamandla kakhulu ukugcina yonke imisebenzi yenkampani yakho entsha okanye ishishini. I-Slack liqonga le ...
I-RVM: isixhobo sokusebenzisa iinguqulelo ezininzi zeRuby ngaxeshanye
Umphathi weRuby Version, odla ngokufinyezwa njenge-RVM, liqonga lesoftware elenzelwe ukulawula ufakelo oluninzi lweRuby kwisixhobo esinye.
IFlameshot: sisixhobo esihle sokubamba kunye nokuhlela izikrini
IFlameshot inamandla kwaye ilula ukusebenzisa isoftware yokubamba isikrini kwiLinux. Ingasebenza kuninzi lonikezelo lweLinux.
Faka ingxelo entsha ye Android Studio 3.2.1 ngo-18.10
Isitudiyo se-Android sisimahla, iqonga lomnqamlezo kunye nomthombo ovulekileyo wesicelo esenziwe kwiJava kwaye siyilelwe kwimbuyekezo ...
Faka izixhobo zeKali Linux kwi-Ubuntu 18.10 ngeKatoolin
Ukufaka izixhobo zeKali Linux ku-Ubuntu akukho lula njengoko isoftware ingafakwanga koovimba. Ukuze sifezekise oku kuya kufuneka
Ulawula njani Ubuntu kude kwifowuni ye-Android?
Ukuze sikwazi ukwenza lo msebenzi wokuba sikwazi ukulawula ikhompyuter yethu kwifowuni yethu ye-Android, i-KDE Connect kulula ngokulula.
Inguqulelo entsha yeLibreOffice 6.1.3 kunye ne-6.0.7 ngoku iyafumaneka
UXwebhu loXwebhu lwenze kwiintsuku ezimbalwa ezidlulileyo ukubhengezwa ngokusesikweni kwephakheji yomthombo ovulekileyo, iLibreOffice 6.1.3 kunye no-6.0.7.
Umfundi we-Epub: sisixhobo sokufunda iifayile ze-epub kwisiphelo sendlela
Ngenye indlela kwezi zicelo, banokusebenzisa i-terminal ukufunda iincwadi zedijithali ngesicelo se-ePub, isixhobo ...
Faka inguqulelo entsha ye-Linux kernel yokuhlaziya i-4.19
I-kernel ye-Linux yinxalenye ebalulekileyo yayo nayiphi na inkqubo ye-Linux. Unoxanduva lokwabiwa kwezixhobo, ...
Uyifaka njani iQelaViewer 13.2 kwi-Ubuntu 18.10 kunye neziphumo?
I-TeamViewer yiprojekthi yasimahla, enqamlezayo eyilelwe abasebenzisi bokugqibela kunye nabalawuli benkqubo abafuna isisombululo esifanelekileyo ...
Ukwahlula i-CD Ripper: isixhobo esifanelekileyo sokukhupha umsindo kwiiCD zakho
Isicelo sesoftware yasimahla, ekhutshwe nguGuqulelo kawonkewonke weGNU kawonkewonke 2. Unokufumana kwakhona iithegi (iithegi) kwiCDDB ...
Uyifaka njani i-Audacity kwi-Ubuntu 18.10 kunye neziphumo?
Uphicotho-zincwadi yenye yezona nkqubo zibonakalisayo zesoftware yasimahla, esinokurekhoda ngayo kwaye sihlele iaudiyo ...
I-Photivo: sisixhobo esihle kakhulu sokuhlela iifayile zeRAW kumgangatho ophezulu
I-Photivo sisixhobo esinamandla kakhulu sokuvula iifoto esiza kunye nealgorithms eziphambili ukunceda ...
I-Streamlink: enye indlela ebalaseleyo kwi-Livestreamer
I-Streamlink ilungisa imicimbi eqhelekileyo kwi-Livestreamer (ye-twitch, picarto, itvplayer, crunchyroll, periscope kunye ne-douyutv, phakathi kwabanye) ...
Inguqulelo entsha yeFirefox 63 eneZongezo zeWeb ngoku ilungile
Isiseko seMozilla sikhuphe ingxelo entsha yeFirefox efikelela kwinguqu yayo yama-63 kunye neeLwandiso zeWebhu kwiinkqubo zayo nangaphezulu
I-Tryton-Inkqubo yoCwangciso lweZibonelelo eziGqwesileyo
Ukufaka i-Oracle Java 11 kwi-Ubuntu 18.10 kunye neziphumo
Enye yezinto ekufuneka siyenzile phantse kwangoko kukongeza inkxaso yeJava kwinkqubo, esinokuthi ngayo ...
Yenza isitayile sakho sangasese se-AWS S3 ngeMinio kwi-Ubuntu
Inkonzo yeAmazon S3 yinkonzo yewebhu yokugcina ilifu enikezelwa yiAmazon Web Services (AWS)….
I-RDM: Isixhobo solawulo lwedesktop kwakhona
I-Redis yinjini yedatha ekwi-memory, esekwe kugcino lwetafile lwe-hashes (isitshixo / ixabiso) kodwa ngokuzikhethela ...
Uyifaka njani ifolda yeDropbox njengenkqubo yefayile ebonakalayo?
I-Dbxfs sisixhobo esisetyenziselwa ukunyusa ifolda yeDropbox kwalapha njengenkqubo yefayile ebonakalayo kwiinkqubo ezisebenza njenge-Unix.
KeeWeb: Umthombo ovulekileyo kunye nomphathi wegama eligqithisiweyo leqonga
I-Keeweb ngumphathi wegama eligqithisiweyo leqonga. Ungagcina onke amagama okugqitha ngaphandle kweintanethi kwaye uwavumelanise neakho ...
Isixhobo sokuxuba sePDF: sisixhobo esihle sokuhlela iPDF kuBuntu
Isixhobo sokuDibanisa i-PDF sisixhobo esimangalisayo, esilula nesisindayo esivumela ukuba wahlule, ujoyine, ujikeleze kwaye udibanise iifayile zePDF, nokuba zikwifayile enye ...
Shotcut umhleli wevidiyo evulekileyo yemithombo evulekileyo
I-Shotcut ngowona mthombo uvulekileyo, umhleli wevidiyo eqongeni, eneempawu ezininzi, kubandakanya ...
Isidlali somculo seXiX: isidlali somculo esisebenza ngeendlela ezininzi
XiX Player sisixhobo esisebenziseka ngokulula esivulekileyo somnqamlezo osisidlali somculo esingasasebenziyo ngoku esisebenza kwiLinux, kwiLinux ARM, kunye ne ...
IGuayadeque: isidlali somculo esinamandla seLinux
IGuayadeque sisidlali somculo esinamandla simahla nesivulekileyo, sibhaliwe kulwimi lwenkqubo lweC ++ kwaye sisebenzisa ikhithi ...
I-DeaDBeeF: isidlali somculo esinqamlezayo
UDeaDBeeF ngumdlali weaudiyo ofumanekayo kwiGNU Linux, Android kunye nezinye iinkqubo ezinje nge-Unix. UDeaDBeeF sisoftware yasimahla ...
Uyifumana njani inguqulelo yeVLC yamva nje ku-Ubuntu 18.04
Isifundo sendlela yokufaka ingxelo yokugqibela yeVLC yemithombo yeendaba kwi-Ubuntu 18.04 ngeendaba zamva nje ezinikezelwa ngohlobo lwamva nje ...
I-FreeFileSync: Vumelanisa kwaye ugcine idatha kunye neefayile zakho
I-FreeFileSync sisixhobo esivulekileyo sokungqamanisa kunye nesixhobo sokuthelekisa. Ilungiselelwe ukusebenza okuphezulu kunye nokukhululeka kwe ...
Inguqulelo entsha ye-OpenShot 2.4.3 iyafumaneka kuluntu
I-OpenShot 2.4.3 izisa inkxaso yokuguqula iimaski kunye notshintsho nangaliphi na ixesha kunye neemaski zoopopayi, iqhosha lokugcina izakhelo ...
I-Chamilo LMS: iqonga elivulekileyo lokufunda i-E
I-Chamilo LMS sisoftware yasimahla ye-E-learning Platform, enelayisensi phantsi kwe-GNU / GPLv3, yokulawulwa kobuso ngobuso okanye ukufunda okuqinisekileyo ...
Uyitshisa njani iidiski ze-Blu-ray kwi-Ubuntu kunye neziphumo usebenzisa i-K3b?
Ukuze sikwazi ukutshisa iidiski zolu hlobo sinokusebenzisa i-K3b esisilumko esisebenza kakuhle kwi-KDE, kodwa ...
IBitwarden: Umphathi obalaseleyo wegama eligqithisiweyo le-Ubuntu
Esi sisisombululo esipheleleyo solawulo lwegama eligqithisiweyo elisekwe kwilifu. Iza nezinto ezithile ezizodwa ezine ...
Izicelo ezi-3 zedijithali zokusebenzela ezisebenza kubuntu
Izicelo zeDijithali yokuSebenza ngokuSebenza (i-DAW) zisetyenziselwa ukurekhoda, ukuhlela, kunye nokwenza kunye / okanye ukuvelisa iifayile zomsindo.
I-Clinews-Funda iindaba zamva nje kumgca wokuyalela
Into esiza kuthetha ngayo namhlanje ibizwa ngokuba yiClinews esetyenziselwa ukufunda iindaba zamva nje ezisuka kwisiza
Bethela iifayile zakho kwiinkonzo zefu nge-Cryptomator
I-Cryptomator sisisombululo esifihlakeleyo somxhasi esecaleni sokubethela iifayile kwilifu.
Isinyathelo sokuqala sokufaka i-NextCloud 14 ukufaka iseva yewebhu kunye ne-PHP. I-PHP7 izisa uphuculo oluninzi kwiinguqulelo zangaphambili kwaye iya kunyusa i-NextCloud
Khuphela kwaye utshintshe umfanekiso wakho ongemva ngePhepha lodonga
Kwiminyaka emininzi eyadlulayo, omnye wemisebenzi endiyithandayo kakhulu eyaqala ukuthandwa ngelo xesha e ...
Lawula kwaye uvumelanise iinkonzo zakho zamafu kunye neRclone
Isicelo esiza kuthetha ngaso namhlanje kuthiwa yiRclone. Esi sisixhobo esisekwe kumgca weqonga lomyalelo, ngokupheleleyo ...
ICherrytree -ukuthatha inqaku kunye nefomathi enamandla
ICherrytree enobunzima, ekhawulezayo kunye nenqaku lomthombo ovulekileyo lokuthatha isicelo, bambalwa kakhulu amanqaku athatha izicelo ...
ULAWULA umhleli wevidiyo ongekho kumgca weBuntu kunye neziphumo
I-LiVES (isifinyezo sesiNgesi: iNkqubo yokuHlela iVidiyo yeLinux) yinkqubo epheleleyo yokuhlela ividiyo, ngoku exhaswa kwiinkqubo ezininzi ...
Inguqulelo entsha yeFirefox 62 web browser ngoku iyafumaneka
Inguqulelo entsha yesikhangeli sewebhu seMozilla sele ikunye nathi, inguqulelo entsha yesikhangeli sayo sele isungulwe, efikelele kwinto entsha ...
Inguqulelo entsha yeVLC 3.0.4 isidlali semithombo yeendaba sifikile
I-Vlc ngumdlali wemultimedia, isakhelo kunye nekhowudi enokudlala iifayile, imijelo yenethiwekhi, iiDVD, iiCDs zeaudiyo, iiBlu-Rays ...
Uwenza njani umculo kwiChromecast ukusuka Ubuntu?
Ungasasaza ukudlala kwakho ngoku kwePulseAudio kwizixhobo ezahlukeneyo ze-UPnP kwinethiwekhi. Isixhobo kulula ukusisebenzisa kwaye kulula ukumisela.
IJoplin: umthombo ovulekileyo ongomnye u-Evernote
IJoplin sisimahla kwaye ngumthombo ovulekileyo wokwenza isicelo sokuthatha inqaku esinokuphatha inani elikhulu lamanqaku ahleliweyo ...
Umphathi womnatha L2TP iplagi-yenethiwekhi yeManager yoqhagamshelo lwe-L2TP VPN
Le yi-plug-in yeNethiwekhiManager 1.8 kwaye kamva ebonelela ngenkxaso ye-L2TP kunye ne-L2TP / IPsec zonxibelelwano (Oko kukuthi, i-L2TP ngaphezulu kwe-IPsec).
I-KeePassXC 2.3.4 ikhutshwe ngezilungiso ezininzi zegciwane kunye nophuculo
I-KeePassXC ngumphathi wegama eligqithisiweyo lasimahla nelivulekileyo elinelayisensi phantsi kwelayisensi kaRhulumente yeGNU. Esi sicelo siqale njengefolokhwe
Uyifaka njani iPale Moon kwi-Ubuntu 18.04
Isifundo esincinci sendlela yokufaka isikhangeli sewebhu sePale Moon kwi-Ubuntu 18.04 yethu. Isikhokelo esilula esiya kusinceda ukuba sibe nesikhangeli sewebhu esilula
Khangela kwaye ungeze amazwi eengoma zakho ozithandayo kunye neMediaHuman Lyrics Finder
ImediaHuman Lyrics Finder sisoftware yasimahla yesicelo esinokukunceda ufumane kwaye ungeze amazwi apheleleyo kuzo zonke iingoma ezikwi ...
I-Makehuman -I-3D yaBantu yokuDala kunye neNkqubo yeModeli
I-Makehuman sisicelo semizobo sekhompyuter ye-3D yokuprinta prototypic humanoids ukuze isetyenziswe kwimizobo yekhompyuter.
Surf, umkhangeli omncinci kulabo bafuna ukubonisana nephepha lewebhu
I-Surf sisikhangeli sewebhu esincinci esinokuthi sisifake ku-Ubuntu ngokulula nangokulula, nangona ayizukuba yinkqubo efana neFirefox okanye iChannel ...
UTixati umthengi ogqwesileyo weBitTorrent oneemfuno eziphantsi kwizixhobo zenkqubo
I-Tixati ngumthengi weBitTorrent obhalwe kwi-C ++, enokusetyenziswa kwiLinux nakwiWindows, eyilelwe ukukhanya kwizibonelelo zenkqubo.
Isisombululo kwingxaki "Wamkelekile kwimowudi engxamisekileyo" ku-Ubuntu nakwiziphumo
Kuya kufuneka siyiqonde into yokuba kubonakala ngathi kungenxa yokuba le nkqubo iyazikhusela kwanolwazi olukuyo ngaphakathi.
UEric: Indalo yoPhuhliso oluHlanganisiweyo yePython kunye neRuby
Yindawo edibeneyo yophuhliso lweelwimi zePython kunye neRuby. Isekwe kwiqonga lezixhobo zeQt, elidibanisa ulawulo oluphezulu
I-AltYo, isiphelo esigqibeleleyo sokwehla kweBuntu kunye neziphumo
I-AltYo sisiphelo sendlela esine-emulator ebhalwe eVala kwaye ixhaswe yi-GTK 3, isekwe kwi-TEV (i-Virtual Terminal Emulator) yesiphelo sendlela.
Iipodcasts, isicelo sokumamela iipodcasts zethu kwi-Ubuntu 18.04 desktop
IiPodcasts okanye iGnome Podcasts sisicelo sedesktop yeGnome ukumamela iipodcasts kwikhompyuter yethu kwaye kule meko ivela kwi-Ubuntu 18.04 ...
Ezona zixhobo zibalaseleyo zokubuyisela izahlulelo kunye neefayile-icandelo 2
Nokuba ngempazamo okanye ngokucinga ukuba ulwazi esilususayo alusekho mfuneko, kuza ixesha apho kufuneka sivele ...
Ezona zixhobo zibalaseleyo zokubuyisela izahlulelo kunye neefayile
Ukuvelisa kunye nokumisela iikhowudi ze-QR ku-Ubuntu ngoncedo lwe-QtQR
I-QtQR sisicelo esibonakalayo se-zbar-izixhobo ezisekwe kwi-Qt, i-Python kunye ne-PyQt4 ekuvumela ukuba uvelise iikhowudi ze-QR, ukhangele kwaye umise iikhowudi ze-QR kwifayile.
Inguqulelo entsha 6.0 yomhleli wevidiyo yeVidCutter sele ikhutshiwe
IVidCutter yinkqubo elula yokuhlela ividiyo. Ilula ukuyisebenzisa, kodwa inevidiyo enamandla yokuhlela ekuvumela ukuba ...
I-CodeLobster: i-IDE enqamlezileyo ye-PHP yophuhliso
Iimyuziyam: Isidlali somculo esilula, esicocekileyo nesinqamlezayo
I-Museeks ayisindi, iqonga lomnqamlezo (iLinux, iMac OS kunye neWindows) isidlali somculo iMuseeks isidlali somculo esisebenzisa iNode.js njengesiphelo esingasemva.
Faka iCantata iklayenti yomzobo kwiQt5 ye-MPD kwi-Ubuntu 18.04 LTS
ICantata yindawo yasimahla ngokupheleleyo, evulekileyo kunye ne-cross-platform MPD (Music Player Daemon) iklayenti (iLinux, Windows, Mac OS. Inkqubo nayo ...
Mkcert: isixhobo sokwenza izatifikethi ze-SSL zophuhliso lwasekhaya
Kule nqaku, siza kuxhamla kwisixhobo ukuze sikwazi ukufaka izatifikethi ze-SSL kwindawo yethu kwinkqubo yethu.
KDevelop a IDE esihle C, C ++ kunye nezinye iilwimi zenkqubo
Yindawo yasimahla kunye nophuhliso lwendibaniselwano edityanisiweyo (yeWindows kunye neGNU / Linux-Unix) epapashwe phantsi kwelayisensi yeGPL kwaye ijolise ekusebenziseni phantsi kwe ...
I-X2CRM evulelekileyo yokuthengisa kunye nenkqubo yolawulo lobudlelwane kwintengiso
I-X2Engine sisibonelelo simahla nesisimahla seCRM (uLawulo lobuhlobo baMthengi) isicelo solawulo Yenzelwe ukuthengisa abantu ...
Uyifaka njani inkqubo yedatha yeMongoDB kwi-Ubuntu?
I-MongoDB luxwebhu lolwazi oluvulekileyo olujolise kwinkqubo yedatha yeNoSQL, le yinkqubo yolawulo lwedatha yanamhlanje
Nxibelelana nesixhobo sokudibanisa iLibreOffice kwilifu
I-Collabora yinguqulelo eguqulweyo yeOfisi yeOfisi ekwi-Intanethi, eneempawu ezinokuthelekiswa nezixhobo ezininzi esinokuzifumana kwiwebhu ...
IVidiyoMorph: sisiguquli esiguquliweyo somthombo wemithombo yemithombo yeendaba
IVidiyoMorph ibhaliwe kulwimi lwenkqubo kunye nePython 3 kwaye isebenzisa ilayibrari yeFFmpeg exhaswa ngayo ukuze ikwazi ...
Uyifaka njani iPostgreSQL kwi-Ubuntu 18.04 LTS Bionic Beaver kunye neziphumo?
I-PostgreSQL yinkqubo yolawulo lwedatha ehambelana nolwalamano olunamandla, oluphambili kunye nolusebenzayo oluphezulu, iPostgreSQL isimahla
I-StreamStudio: jonga ukhuphele iYouTube kunye neVidiyo zeVidiyo
I-StreamStudio eya kuthi isenze sikwazi ukujonga iividiyo kwamanye amaqonga evidiyo athandwayo kwinkqubo yethu.
Yonwabela iTwitch kwintuthuzelo yedesktop yakho kunye neGNOME Twitch
Ukuba ujonga indlela yokonwabela ukusasazwa kakuhle kwemidlalo oyithandayo yevidiyo, ngokuqinisekileyo lelinye lamaqonga owasebenzisayo ...
I-KRDC-usetyenziso lwe KDE kude konxibelelwano lwedesktop
I-KRDC (Unxibelelwano lweDesktop ekude ye-KDE) yisoftware yedesktop ekude, eyilelwe ngokukodwa ukuba ibe sisixhobo esivela ...
KeePassXC Umphathi wegama eligqithisiweyo-Umphathi wegama eligqithisiweyo lomnqamlezo
KeePassXC ngumphathi wegama eligqithisiweyo elinamandla kunye nomthombo ovulekileyo. Ikhowudi yemithombo epheleleyo ipapashwa phantsi kwemiqathango ...
Uyifaka njani iMesa yevidiyo kwi-Ubuntu 18.04 LTS?
I-Mesa ilayibrari yemizobo ebonelela ngokusetyenziswa okuqhelekileyo kwe-OpenGL yokubonelela ngemizobo ye-XNUMXD kumaqonga amaninzi.
I-Otter: isikhangeli sewebhu esiphenjelelwe luhlobo lwakudala lwesikhangeli seOpera
I-Otter yindawo yasimahla kunye nevulekileyo yomnqamlezo wewebhu, ejolise ekuphindaphindeni imiba yesikhangeli seOpera 12.x
Ajenti: Iphaneli yokulawula ebalaseleyo yeserver yakho
I-Ajenti eyipaneli yokulawula umthombo ovulekileyo enokusetyenziselwa imisebenzi eyahlukeneyo yolawulo lomncedisi.
Ukugqitha-ngumphathi wegama eligqibeleleyo lomnqamlezo
I-Enpass ngumphathi wegama eligqithisiweyo leqonga elineenguqulelo zeLinux, Mac, Windows, Chromebook, iOS, Android, BlackBerry, kunye nokunye.
I-MythTV liziko elikhulu lemidiya elinemisebenzi yokurekhoda i-TV
I-MythTV sisicelo esisimahla nesivulekileyo esisasazwa phantsi kwemiqathango ye-GNU GPL umsebenzi wayo ophambili kukurekhoda ividiyo.
Foxit Reader: umfundi ogqwesileyo wePDF kunye nenye indlela eya kwiAdobe Reader
I-Foxit Reader, umfundi oqhelekileyo we-PDF, othe wathelekiswa ne-Adobe Reader, kodwa le ilula kune-Adobe Reader
Faka inguqulelo yeAvidemux 2.7.1 kwi-Ubuntu 18.04 kunye neziphumo
I-Avidemux, iqonga lomnqamlezo kunye nesicelo esivulekileyo sokuhlela ividiyo phantsi kwelayisensi ye-GNU GPL, ibhaliwe kulwimi lwenkqubo lweC / C ++
Inyanga emva kwenyanga, uhlaziyo lweKhowudi yeVenkile yeVidiyo ifunyenwe kwaye inyanga kaJuni ayibanga njalo, kuhlaziyo lomhleli omtsha
Pyenv: Faka iinguqulelo ezininzi zePython kwinkqubo yakho
I-Pyenv sisixhobo esisekwe kwi-rbenv kunye ne-ruby-yokwakha kwaye le nto yahlengahlengiswa ukuze isebenze nolwimi lwenkqubo yePython
Faka iXine kwi-Ubuntu 18.04 LTS kunye neziphumo
I-Xine yinjini yomdlali wemultimedia efumanekayo kwiinkqubo zokusebenza ezinje nge-UNIX, lo mdlali ukhutshwa phantsi kwelayisensi yeGNU GPL
I-LyX: Iprosesa enamandla ye-LaTeX yamagama
ILyX ngumthombo wasimahla, ovulekileyo kunye nomhleli wombhalo weqonga ovumela ukuhlelwa kokubhaliweyo kusetyenziswa i-LaTeX, ngenxa yoko izuz 'ilifa onke amandla ayo.
I-Shotwell 0.29.3: Ukwamkelwa kobuso kubuya kule nguqulo
UShotwell ngumbonisi womfanekiso simahla kunye nomququzeleli oyinxalenye yemo ye-desktop ye-GNOME, esi sicelo sibhalwe ngolwimi lwe
Uyifaka njani i-AMD / ATI abaqhubi ku-Ubuntu 18.04?
Ukufakela abaqhubi bevidiyo ye-chipset yethu kufuneka sazi imodeli yemizobo yevidiyo, oku kubandakanya
Eli nqaku ligxile ikakhulu kwi-newbies kunye nabaqalayo benkqubo, kuba oku kuhlala kungomnye wezihloko ebeziqhele ukwenza
Kweli nqaku siza kwabelana ngeyona Dock idumileyo esinokuyifumana kwinkqubo yethu, siza kuqala ngayo.
I-Qalculate yindawo yasimahla, evulekileyo, yesicelo sokubala esiphambanweni esinelayisensi phantsi kwelayisensi kawonkewonke ye-GNU V2 ekulula ukuyisebenzisa ...
I-Tilda -isiphelo esisezantsi esenziwe ngokwezifiso
I-Tilda sisiphelo sendlela kwaye sinokuthelekiswa nezinye iitheminali ezithandwayo ezinje nge-gnome-terminal (Gnome), Konsole (KDE), xterm nabanye
Inguqulelo entsha yomhleli weZibiyeli 1.13 ngoku iyafumaneka
Iibakaki ngumhleli wemithombo evulekileyo yanamhlanje eqalwe yiAdobe. Iqela ekujoliswe kulo apho iiBhakethi zenziwe khona liquka abaphuhlisi bokugqibela ...
I-Liferea: ngumthombo osimahla kunye nomthombo ovulekileyo wokufunda weRSS
I-Liferea (iLinux feed Reader) ngumthombo ovulekileyo wokufunda i-RSS eyakhiwe ukusuka kulwimi lwe-C, esi sicelo siyahambelana noninzi lwe ...
UGqr.Geo: Uyilo kunye nokusebenzisa imizobo esebenzayo yejiyometri
UGqr.Geo sisoftware yasimahla nevulekileyo ekhutshwe phantsi kwelayisensi ye-GNU GPL, esi sicelo senzelwe i-geometry esebenzayo evumela
Iplagi yeVim: umphathi weplagi yeVim
IVim-plug sisimahla, ngumthombo ovulekileyo, umphathi we-vim plugin ongakwaziyo ukufaka okanye ukuhlaziya iiplagi ngokuhambelana.
I-Ohcount: sisixhobo esidlulayo kwaye sibala imigca yekhowudi yemvelaphi
I-Ohcount sisixhobo esilula somgca wokuyalela odibanisa ikhowudi yemithombo kwaye uprinta inani elipheleleyo lemigca yefayile yomthombo.
Uyifaka njani i-Nextcloud kwi-Ubuntu 18.04 Bionic Beaver?
I-Nextcloud ibonelela ngeendlela zokhuselo ezakhelwe-ngaphakathi kunezinye izisombululo zelifu labucala, ezinje ngokuqinisekiswa kwezinto ezimbini, ukukhusela amandla
Wowcup: bonisa umdlalo kunye neziphumo zeFIFA 2018 kwisiphelo sendlela
I-Wowcup sisicelo esibhalwe kuTypeScript sisebenzisa i-oclif Isakhelo seNode.js, esi sixhobo sisekwe kusetyenziso lomgca wokuyalela ...
I-OpenSnitch: I-firewall encinci esekwe kwi-Ubuntu
I-OpenSnitch esisicelo seFirewall esibhalwe kwiPython yeenkqubo ze-GNU / Linux ezinokusetyenziselwa ukubeka esweni usetyenziso ...
I-OpenRA: phinda wenze imidlalo ye-Command & Conquer yakudala
I-OpenRA ngumthombo wasimahla, ovulekileyo kunye neprojekthi yeplatform eninzi ephinda ihlaziye imidlalo yeqhinga eliqhelekileyo lokuLawula kunye nokuNqoba ngexesha ...
UKaku: mamela umculo kwi-Intanethi kwi-YouTube ngalo mdlali
I-Kaku sisidlali somculo esivulekileyo nesivulekileyo, sisixhobo esiphindaphindayo ngoko siyafumaneka kwiWindows, Linux nakwiMacOS.
IsandlaBrake: sisiguquli somthombo wefayile yemultimedia
Esi sicelo senzelwe ukuhanjiswa kweefayile ezimanyelwayo kunye nevidiyo, esi sisicelo seplatform ezininzi ukuze kube njalo
ComplexShutdown: cwangcisa imisebenzi yakho kwaye ucime ikhompyuter yakho xa ugqibile
IComplexShutdown sisicelo esibhalwe kwiPython esivumela ukuba ucwangcise ukucima, ukucima, ukuqala ngokutsha, ukubamba ixesha lokulala, kunye nokuyalelwa komyalelo.
Irekhoda yomsindo: Isicelo sokurekhoda nokurekhoda iaudiyo kwinkqubo yakho
Irekhoda yeaudiyo yinkqubo emangalisayo yokurekhoda. Esi sixhobo sincinci sivumela umsebenzisi ukuba arekhode iaudiyo kwiimakrofoni, ii-webcams, ikhadi lesandi senkqubo, isidlali semithombo yeendaba okanye isikhangeli, njl. Ungagcina ukurekhoda kwiifomathi ezininzi ezidwelisiweyo: Ogg, MP3, Flac, Wav (22kHz), Wav (44kHz), kunye ne-SPX.
I-FreeCAD i-3D yokubumba ihlaziyiwe yenguqulo ye-0.17
I-FreeCAD sisicelo esivulelekileyo nesivulekileyo se-CAD (Uyilo oluNcedisiweyo lweKhompyuter) kwi-3D, oko kukuthi, uyilo lincediswa yikhompyuter ngemilinganiselo emithathu, uhlobo lweparameter. IFreeCAD inelayisensi phantsi kweLGPL.
Ukufumana kunye nokufumana ulwazi ngeefayile kwifomathi yePDF sele kuyinto eqhelekileyo, leyo, ngokungafaniyo neminyaka embalwa edlulileyo, ibinqabile. Enye yesoftware eyaziwayo yokufunda nokuhlela ezi yiAdobe Acrobat.
I-Ocenaudio: umhleli weqonga lomsindo osimahla weqonga
I-Ocenaudio sisicelo sasimahla nesamaqonga asinika ithuba lokuba sikwazi ukwenza uhlengahlengiso lwomsindo kuyo ngendlela elula nekhawulezayo. Inoluhlu olubanzi lweempawu eziluncedo kuzo zombini i-novice kunye nomsebenzisi ohambele phambili. Le app isekwe kwisakhelo se-Ocen.
Uyifaka njani isoftware ebonakalayo ye-QEMU ku-Ubuntu?
I-QEMU sisicelo esisimahla nesivulekileyo esine layisenisi kwinxalenye ephantsi kwe-LGPL kunye ne-GNU GPL esekwe kulinganiso lweeprosesa ngokusekwe kuguqulelo olunamandla lwee-binaries. I-QEMU ikwanakho nokusebenza kokubonakalayo ngaphakathi kwenkqubo yokusebenza, nokuba yi-GNU / Linux, Windows.
Vula iJardin: isoftware yokulawula izityalo zasegadini
Inkqubo esiza kuthetha ngayo namhlanje ibizwa ngokuba yi-Open Jardin esisicelo esisimahla nesivulekileyo esinelayisensi phantsi kwe-GNU GPL v3.0. I-Jardin evulekileyo sisoftware egxile kwi-permaculture evumela umsebenzisi ukuba aphathe izityalo zegadi kwisicwangciso.
Khangela i-Intanethi kwi-terminal kunye neLynx
I-Lynx sisikhangeli sewebhu, ngokungafaniyo nesona sithandwa kakhulu, sisetyenziswa kwisiphelo sendlela kunye nokuhamba kusetyenziswa indlela yokubhaliweyo. I-Lynx inokuba sisixhobo esinomtsalane kubathandi besiphelo kunye nakubantu abathanda ukwandisa ukusebenza kwabo kakuhle.
Ukuphucula ukusebenza kwenkqubo yakho kunye nokusetyenziswa kokulayisha kwangaphambili kunye nePrelink
Ngokuzenzekelayo Ubuntu bukhawuleza ngokwaneleyo, nangona oku kuxhomekeke ikakhulu kwinani le-RAM kunye nenqanaba lehard drive yakho, nangona usebenzisa i-SDD ufumana ukusebenza okungcono. Kungenxa yoko eli xesha siza kuthetha ngalo nezicelo eziza kusinceda ukuba sikhawulezise ...
Uyifaka njani iConky Manager kwi-Ubuntu 18.04?
IConky sisimahla kunye nesicelo somthombo ovulekileyo esifumaneka kwiLinux, FreeBSD, kunye neOpenBSD. I-Conky inokulungiswa kakhulu kwaye ikuvumela ukuba ujonge ezinye iinkqubo ezibandakanya imeko ye-CPU, imemori ekhoyo, indawo kukwahlulahlula kunye nokunye ...
ToutEnClic: isicelo sabantwana abakhubazekileyo eklasini
I-ToutEnClic sisicelo esisimahla nesivulekileyo esenziwe ngu-Alain Delgrange kwiqonga le-Gnu / Linux ...
Kukho intsomi yokuba ukusebenzisa ikhompyuter, umabonwakude, i-smartphone okanye nasiphi na isixhobo esinesikrini endaweni enye ...
Uyifaka njani i-Docker kwi-Ubuntu 18.04 kunye neziphumo?
Ngeli xesha siza kujonga i-Docker, esisicelo esivulekileyo somthombo weqonga ohambisa ukuthunyelwa kwezicelo ngaphakathi kwezikhongozeli zesoftware, ukubonelela ngolungelelwaniso olongezelelekileyo lokukhutshwa kunye nokuzenzekelayo kwe-Virtualization kwinqanaba lenkqubo yokusebenza kwiLinux.
Yintoni i-AppImage kunye nendlela yokuzifaka ku-Ubuntu?
Iminyaka sineepakeji ze-DEB zokusasazwa kweLinux kunye ne-Ubuntu esekwe kwi-RPM ye-Fedora / SUSE esekwe kwiLinux. Olu hlobo lonikezelo lwenza kube lula kubasebenzisi bokusasaza ukufaka isoftware, kodwa ayisiyiyo indlela efanelekileyo yonjiniyela.
Uyifaka njani i-Apache web server kwi-Ubuntu 18.04?
I-Apache ngumthombo ovulekileyo, i-cross-platform ye-HTTP iseva yewebhu esebenzisa umgaqo-nkqubo we-HTTP / 1.12 kunye nombono wendawo ebonakalayo. Injongo yale projekthi kukubonelela ngokukhuselekileyo, okusebenzayo, kunye nokwandiswa kweseva enika iinkonzo ze-HTTP ngokuvumelanisa nemigangatho yangoku ye-HTTP.
Kwinguqu yokugqibela ye-Ubuntu, ukuba ichaze i-17.10, ukusetyenziswa kweQelaViewer bekuncitshisiwe ngumzobo wale nto, kuba wonke umntu uya kwazi ku-Ubuntu 17.10 isigqibo besenziwe ukubeka i-Wayland njengeseva ephambili, nangona ikwayi-Xorg yadweliswa njengesekondari kwaye iyafumaneka.
IJava ngokungathandabuzekiyo lulwimi lwenkqubo olusetyenziselwa iinjongo ezahlukeneyo kwaye phantse luyimfuneko ekuncedeni ukwenziwa kunye nokusebenza kwezixhobo ezahlukeneyo, ukufakelwa kweJava kungumsebenzi obalulekileyo emva kokwenza ukufakelwa koku ngesifundo esilula.
Iwayini isoftware evulelekileyo nevulekileyo evumela abasebenzisi ukuba basebenzise usetyenziso lweWindows kwiLinux kunye nezinye iinkqubo ezinje nge-Unix. Ukuze ubuchwephesha ngakumbi, iwayini ngumaleko wokuhambelana; Guqula iifowuni zenkqubo ukusuka kwiWindows ukuya kwiLinux.
Faka iPlayOnLinux kwi-Ubuntu 18.04 LTS
I-PlayOnLinux yindawo yasimahla nevulekileyo yemifanekiso engaphambili yeWayini evumela abasebenzisi beLinux ukuba bafake inani elikhulu lemidlalo yekhompyuter esekwe kwiWindows kunye nokusetyenziswa okunje ngeOfisi yeMicrosoft (2000 ukuya ku-2010), iSteam, iFotohop, kunye nezinye izinto ezininzi.
Faka ingxelo entsha ye-GIMP 2.10 kwi-Ubuntu 18.04 LTS
Kutshanje abafana abaphethe uphuhliso lwe-GIMP babhengeze uhlobo olutsha oluzinzileyo lwale software inkulu, kuba esi sicelo sasimahla nesisimahla sokuhlela umfanekiso we-GIMP sinokukhutshwa okutsha kwe-GIMP 2.10 efika emva kweminyaka emithandathu emva kwenguqu yokugqibela enkulu engu-2.8.
Udeler ngumthombo ovulekileyo, usetyenziso lweqonga lokukhuphela apho unokukhuphela iividiyo zekhosi ye-Udemy kwiPC yakho simahla. Udeler yabhalwa kwi-Electron ukuze ibe ne-minimalist, intuitive, kunye ne-interface yomsebenzisi ehambelanayo kwi-Linux, Mac kunye ne-Windows OS.
Kweli candelo sabelana nawe ngabahleli beekhowudi abasetyenziswa kakhulu kwiLinux abanayo yonke into oyifunayo ukongeza ekuxhaseni ezona zinto zisisiseko zomhleli olula.
Olona lwandiso lubalaseleyo lweNautilus
I-Nautilus ngokungathandabuzekiyo inemisebenzi embalwa elungileyo eyigcina ekubeni ibe ngumphathi wefayile elula, ukuba awuyazi okanye awuyibonanga kwaye uyazibuza ukuba yintoni iNautilus, kulungile, ngumphathi lowo usebenzisa lonke ixesha uvula ifolda.
Umdlali odlalwayo ongumdlali weaudiyo enkulu
Ewe, uLplayer yenye yezo, kuba ngumdlali we-minimalist onesimo esibonakalayo esilula nesisebenzisekayo esibeka kuphela izixhobo eziyimfuneko kwiscreen, kubandakanya nolawulo lomdlali kunye noluhlu lwengoma.
I-TraGtor i-GUI ye-ffmpeg Encoder
Ngenxa yenani elikhulu lokukhetha esinikwa yi-Fmpmpeg, ukusetyenziswa kwayo kunokuba nzima ngakumbi kumsebenzisi oqhelekileyo, yiyo loo nto namhlanje ndiza kubelana nawe ngesicelo esikhulu. I-TraGtor ujongano lomzobo womsebenzisi (i-GUI) yeFFmpeg.
Emva kokwenza ufakelo oluyimpumelelo lweRhafu kwinkqubo yethu, enye yeengxaki zokuqala abanye abanazo kukuba usetyenziso lungesiNgesi, ke ayinguye wonke umntu othanda oku. Kwakhona kwesi sifundo sincinci siza kubona indlela yokufaka ii-add-on kwiziko lethu lemultimedia.
Ngaba le sicelo sithetha ngayo, ndiyakuqinisekisa ukuba sele uvile ngayo okanye uyazi, i-Kodi, eyayisaziwa njenge-XBMC liziko lemultimedia lokuzonwabisa eliphindaphindwayo, elisasazwa phantsi kwelayisensi ye-GNU / GPL.
Olona hlobo longezelelekileyo lwasimahla lwe-9 lweLibreOffice
Ngaphandle kwamathandabuzo iLibreOffice sele ipakishwe ngetoni yeempawu kwaye eyona ilungileyo inokwandiswa ngokusebenzisa iiplagi ezithile, ezibizwa ngokuba zandiso. Izandiso zizixhobo ezinokongezwa okanye zisuswe ngokuzimeleyo kufakelo oluphambili, kwaye zinokongeza ezintsha.
Gcwalisa ukufakwa kweLibreOffice nolu lwandiso
Emva kokufaka i-LibreOffice 6, kusekho ulungelelwaniso ekufuneka lwenziwe ukuze kufakelwe ngokupheleleyo indawo yethu ekhethiweyo yeofisi. Elinye lamanyathelo okuqala kukutshintsha ulwimi lwesicelo kuba ulwimi olungagqibekanga sisiNgesi ...
Faka iSpotify ku-Ubuntu nakwiziphumo
Kulabo abangayaziyo le nkonzo ngendlela emfutshane, ndingakuxelela ukuba iSpotify yinkqubo yeplatform, njengoko benditshilo ngaphambili, inokusetyenziswa kwiWindows, Linux nakwiMAC, nakwi-Android nakwi-iOS.
Yazi amanqanaba e-inki yomshicileli wakho ngezi zicelo
Nangona uninzi lweeprinta zaluphi na uhlobo zihlala zizisa idiski yazo nezinto zazo zokufaka (uninzi lweWindows), kwimeko yeLinux yahlukile kancinci yiyo loo nto ndakhangela ulwazi malunga nayo kwaye ndafumana ezinye izicelo ezisincedayo.
Abaxhasi beBitTorrent onokuyisebenzisa ku-Ubuntu
Uninzi lonikezelo lweLinux luhlala lubandakanya umxhasi weBitTorrent ngaphakathi kwenkqubo, ke kweli candelo siza kuthatha ithuba lokukhankanya ezinye zezona zisetyenziswa kakhulu zabaxhasi beBitTorrent.
Olunye ukhetho olwahlukileyo kwiCCleaner Ubuntu bakho
Ngelixa lika-Ubuntu ungacinga ukuba akukho sixhobo sinjalo, kodwa manditsho ukuba asikho, ngeli xesha ndiza kuthatha ithuba lokwabelana nawe ngezinye zeendlela ezizezinye zeCCleaner ze-Ubuntu. Ngokungafaniyo neWindows, iLinux icoca zonke iifayile zethutyana.
Faka ingxelo entsha yomzobo weKrita 4.0 kunye nesuti yomzekeliso
UKrita ngumhleli womfanekiso othandwayo oyilwe njengomzekeliso wedijithali kunye nesuti yokuzoba, iKrita yisoftware yasimahla ehanjiswa phantsi kwelayisensi ye-GNU GPL, isekwe kumathala eencwadi eqonga e KDE kwaye afakiwe kwiCalligra Suite.
Faka iFirefox 59 kwaye ufunde ngeempawu zayo ezintsha kunye nophuculo
Izolo, nge-13 ka-Matshi 2018, kukhutshwe inguqulelo entsha yesikhangeli seFirefox, sifikelela kuguqulelo 59, kunye nolu hlobo lutsha lophuculo longezwa kwisikhangeli kwaye ngakumbi imisebenzi eyongezelelweyo kwabo sele besaziwa kuyo.
Yenza i-backups epheleleyo yenkqubo yakho ngezi zixhobo
Sabelana ngezixhobo zilandelayo onokuzisebenzisa ku-Ubuntu nakwizinto ezinokuthi zenziwe ngokwenza i-backups zenkqubo yakho, i-ppa, usetyenziso kunye nabanye ngazo. Ezi zixhobo ziya kukuvumela ukuba ugcine i-backups zakho kwidiski yakho okanye kwilifu.
IVLC 3.0 Vetinari sele inenkxaso yeChromecast, 8K, HDR 10 nokunye okuninzi
IVLC Media Player inezinto ezininzi ezenza ukuba ibalasele kuninzi esinokuyifumana kwi-Intanethi, nangona esinokukuqaqambisa kukuba lo mdlali unabaqhubi bakhe ngoko ke akukho mfuneko yokuba ukongeza inkxaso kwiindidi ezahlukeneyo zomxholo wemultimedia.
Faka i-VirtualBox 5.2.8 kwi-Ubuntu 17.10
I-VirtualBox sisixhobo esithandwayo sokwandisa ubuchule, esinokuthi sisebenzise kuyo nayiphi na inkqubo yokusebenza (undwendwe) kwinkqubo yethu yokusebenza (umgcini). Ngoncedo lweVirtualBox sinakho ukuvavanya nayiphi na i-OS ngaphandle kokuhlengahlengisa izixhobo zethu.
Ukuphicothwa kwemali sisicelo sasimahla nesivulekileyo esinokurekhoda ngokwamanani kwaye sihlele iaudiyo kwikhompyuter yethu. Esi sicelo liqonga lomnqamlezo ukuze lisetyenziswe kwiWindows, MacOS, Linux kunye nokunye.
I-Aircrack inesiseko sezixhobo ezininzi zokuphicothwa ngenxa yenani elikhulu lezixhobo elizisebenzisayo. Ndimele ndikhankanye ukuba ngaphakathi kwe-chipset esebenza ngokugqibeleleyo nge-aircrack yiRalink.
IWireshark ihlaziyiwe yohlobo lwe-2.4.5
IWireshark sisicazululi senkqubo esimahla, sasisaziwa njenge-Ethereal, iWireshark isetyenziselwa isisombululo kunye nohlalutyo lothungelwano, le nkqubo isivumela ukuba sibambe kwaye sijonge idatha yenethiwekhi kunye nethuba lokukwazi ukufunda imixholo yezinto ezithathiweyo iipakethi.
Abaphathi beFayile aba-8 be-Ubuntu
Umphathi wefayile ubonelela ujongano lomsebenzisi lokulawula iifayile kunye nemikhombandlela. Imisebenzi eqhelekileyo eyenziwa kwiifayile okanye kumaqela eefayile kubandakanya ukudala, ukuvula, ukujonga, ukudlala, ukuhlela okanye ukuprinta, ukuqamba igama kwakhona, njalo njalo.
Kuthiwani ngabafundi abathandekayo, namhlanje ndiza kuthatha ithuba lokwabelana nawe nomphathi omkhulu wokukhuphela kwisiphelo sendlela yeLinux, yiAria2. I-Aria2 ngumphathi wokukhuphela ongasindi kunye nenkxaso ye-HTTP / HTTPS, i-FTP, iBitTorrent, kunye ne-Metalink.
Ukude ungene kwikhompyuter yakho ngeChannel yeDesktop ekude
Izinketho zokukwazi ukufikelela kwikhompyuter yakho ukude zininzi, ngeli xesha siza kusebenzisa isixhobo esisifumana kuGoogle ngesikhangeli sewebhu seGoogle Chrome usebenzisa ulwandiso olubizwa ngokuba yiChannel ekude yeDesktop. Idesktophu ekude yeChannel liqonga elipheleleyo ngokupheleleyo.
Okokugqibela, iLibreoffice 6.0 iyafumaneka
Enye ye-enigmatic and popular suite Office iye yahlaziywa kwinguqulelo entsha, kule meko siza kuthetha ngeLibreOffice efikelele kuhlobo lwe-6.0 emele inyathelo elitsha kunye nokuqhubela phambili. UXwebhu lweSiseko linovuyo ukubhengeza oku kukhutshwa kutsha.
Dstat: isixhobo sokujonga ukusebenza kunye nezixhobo zeqela lethu
I-Dstat sisixhobo sobalo manani esinezixhobo ezininzi. Esi sixhobo sidibanisa amandla e-iostat, vmstat, netstat, kunye ne-ifstat. I-Dstat isivumela ukuba sibeke esweni izixhobo zenkqubo ngexesha lokwenyani. Xa ufuna ukuqokelela olo lwazi ngexesha lokwenyani, i-dstat iya kulungelelanisa neemfuno zakho.
IMicrosoft PowerShell Core sele ifikelele kwinguqulelo yayo engu-6.0
Ngoku iWindows Shell eyaziwayo ine-update entsha efikelela kuhlobo lwe-6.0 ke ngoko izisa ukuphuculwa okutsha kunye nezinto ezininzi phezulu komkhono wayo.
Umxhasi weFayilezilla FTP uhlaziyiwe kwinguqulelo 3.30.0
IFayileZilla yinkqubo yolawulo lonxibelelwano lwe-FTP, iFayileZilla yiplatifti kwaye ikwafumaneka kwiinkqubo ezisebenzayo ze-GNU / Linux, Windows, FreeBSD kunye neMac OS X, kunye nokuba ngumthombo ovulekileyo kwaye unelayisensi phantsi kwelayisensi kawonkewonke yeGNU.
I-KeePass ihlaziyiwe kuhlobo lwayo olutsha lwe-2.38
I-KeePass kukuba iyasivumela ukuba siyilawule ngeendlela ezahlukeneyo, kuba ayikhawulelwanga kwiiphasiwedi zewebhusayithi kuphela, kodwa nakwiinethiwekhi zethu ze-Wi-Fi, abaphathi be-imeyile, ngamafutshane.
Isidlali semidiya se-MPV sihlaziyiwe saya kuhlaziywa ngu-0.28.0
Isidlali esidumileyo somthombo ovulekileyo somdlali we-MPV osekwe kwi-MPlayer kunye ne-mplayer2, ihlaziyiwe kuhlobo lwayo lwe-0.28.0, esi sidlali semultimedia sibonakala ngokusebenza phantsi komgca wokuyalela, ukongeza, umdlali unemveliso yevidiyo esekwe kwi-OpenGL.
Inyathelo ngenyathelo zendlela yokwenza i-hard drive yakho kunye neClonezilla?
Njengoko bendikuxelele kwiposti yangaphambili yeClonezilla, ngeli xesha ndiza kukushiya isifundo ukuze ufunde indlela yokwenza i-hard drive yethu, ebandakanya ukwenza ikopi ngqo yayo yonke into esiyigcinileyo.
Izicelo zokurekhoda idesktop ku-Ubuntu
Ngokubhekisele kumandla okurekhoda idesktop, kukho iinkqubo ezahlukeneyo ezinokusivumela ukuba senze lo msebenzi ngaphakathi ku-Ubuntu, ekubeni siwenze kunye nesiphelo sendlela usebenzisa i-Fmpmpeg, ukuya kwiinkqubo ezinobunkunkqele ezisivumela ukuba sihlele ukubanjwa okuvelisiweyo.
Faka isixhobo sokuGcina amandla ku-Ubuntu
Isixhobo sokuGcina uMandla ngumphathi wamandla oqhubela phambili kwiLinux eza kuseto olungagqibekanga esele lulungiselelwe ubomi bebhetri
IVivaldi esinye isikhangeli sewebhu kwiOpera
IVivaldi sisikhangeli sewebhu esine-freeware esakhelwe ngaphezulu kwe-HTML5 kunye neNode.js, esi sikhangeli siphuhliswa yiVivaldi Technologies ...
ILiferea Reader isanda kukhupha inguqulelo yayo engu-1.12.0
I-Liferea (iLinux feed Reader) ngumthombo ovulekileyo wokufunda we-RSS owakhiwe ukusuka kulwimi lwe-C, esi sicelo siyahambelana noninzi lwe ...
Idesktop yeLumina ihlaziyiwe yohlobo lwe-1.4.0
I-Lumina yindawo esekwe kwi-desktop esekwe kwiinkqubo zokusebenza kwe Unix. Yenzelwe ngokukodwa inkqubo yenkqubo yenyani
IVidCutter ihlaziywa kuhlobo lwe-5.0
Umthombo ovulekileyo kunye nomhleli wevidiyo wamaqonga amaninzi (iGnu / Linux, Windows kunye neMacOS) ngaphandle kokuba kube lula ukuyisebenzisa, esi sixhobo sakhiwe
Yak Yak: umxhasi wedesktop kwiiGoogle Hangouts
Izicelo zemiyalezo yangoku zidlala indima ebalulekileyo ngalo lonke ixesha lobomi bethu, kunjalo ukuba azisekho kuphela ...
I-SMPlayer isazisa ngoguqulelo lwayo olutsha lwe-17.11.2 ngophuculo olujolise kwi-KDE
I-SMPlayer sisidlali semultimedia esingasimahla esisimahla kwaye ineekhowudi zayo ezihlanganisiweyo ezivumela umdlali ukuba akwazi ...
ICorebird ipapasha inguqulelo yayo entsha engu-1.7.3
Kule nguqulo intsha yeCorebird 1.7.3 sinokuqaqambisa ukuba ubude beetweets bonyuswe baba ngama-280, ukongeza koko iyonyuka.
IKrita 3.3.1 inguqulelo entsha ekhutshwe ngokusemthethweni
UKrita ngumhleli wemifanekiso odumileyo oyile njengomzekeliso wedijithali kunye nesuti yokuzoba, iKrita yisoftware yasimahla ehanjiswa phantsi kwelayisensi yeGNU.
Olunye ukhetho olululo kwiFotohop yoBuntu
Nangona ndinokukuxelela ukuba kukho ezinye iindlela kwiLinux kwaye zilungile, ungalahli ithemba xa ujonga olona khetho, eyona nto ...
Ukusetyenziswa kwezikhangeli zewebhu yinxalenye ebalulekileyo yokusetyenziswa kwenkqubo yokusebenza, kuba namhlanje phantse sonke sinonxibelelwano ...
Dwelisa ezinye zokugcina zeBuntu
Ayizizo zonke iisoftware Ubuntu ezifumanekayo ngaphakathi koovimba abagcina Ubuntu, yiyo loo nto kufuneka sisebenzise reposi ...
Yintoni omele uyenze emva kokufaka Ubuntu 17.10 Artful Aardvark
Sele sine-Ubuntu 17.10 Artful Aardvark phakathi kwethu, kwiiyure ezimbalwa emva kokukhutshwa ngokusesikweni kwale nguqulo intsha, besele siqalisile nge ...
I-Rhythmbox ihlaziyiwe kuhlobo lwe-3.4.2
I-Rhythmbox yaziwa ngokuba ngumdlali weqonga onqamlezayo kwaye ubhalwe kwi-C ephefumlelwe ngumdlali we iTunes kunye nokuba yiyo.
I-QupZilla ihlaziywa kuhlobo lwe-2.2.0
I-QupZilla ayisikhaphukhaphu, iqonga lomnqamlezo kunye nesikhangeli somthombo ovulekileyo, isekwe kwiQtWebKit, isikhangeli sinayo yonke imisebenzi yesikhangeli.
I-Opera 48, yazi ukuba yintoni entsha kunye nokuphuculwa kwayo
Iqela lophuhliso lwe-opera liyakuvuyela ukwazisa inguqulelo entsha yeOpera, kwinguqu yayo entsha ezinzileyo "Opera 48" apho bongezwe khona.
Khawufane ucinge: isixhobo esomeleleyo sokuvula isiguquli somfanekiso
Khawufane ucinge ukuba ngumthombo ovulekileyo wokucinezelwa komfanekiso osebenzisa i-pngquant kunye ne-mozjpeg yamathala eencwadi okucinezela, yakhiwe kwi-TypeScript
Inguqulelo yeStellarium 0.16.1 ikhutshwe ngokusemthethweni
I-Stellarium yinkqubo yesoftware yasimahla ebhalwe kwi-C kunye no-C ++, le software iyasivumela ukuba silingise iplanethiyamu kwikhompyuter yethu, iStellarium ...
Inguqulelo yokugqibela yeFirefox 56 ikhutshwe ngokusesikweni
Iqela eligcina i-PPA "Iqela loKhuseleko lweMozilla" linovuyo ukubhengeza ingxelo yokugqibela entsha engu-56.0 yesikhangeli sewebhu seMozilla Firefox.
Ukuu sisicelo esiwukhathalelayo lo msebenzi wokufaka iKernel, ngawo unokuhlaziya i-kernel kwindlela yakho ngendlela elula.
I-VirtualBox ipapasha inguqulelo yayo entsha 5.1.28
I-VirtualBox isivumela ukuba sikwazi ukwenza iidiski eziqinisekileyo apho sinokufaka khona inkqubo yokusebenza yeendwendwe kuleyo siyisebenzisayo ...
IBlender 2.79 ikhutshwe ngokusemthethweni
I-Blender ngumthombo ovulekileyo, inkqubo yeqonga elenzelwe ukwakheka kwento ye-3D, ukukhanya, ukunikezela, oopopayi, njl. Oku kubandakanya ...
Faka i-PHP 7.1 kwi-Ubuntu 17.04
I-PHP (Iphepha lasekhaya lobuqu, isiQinisekiso seziQinisekiso) lulwimi oludumileyo lwenkqubo olunikezelwa kwicala leseva, le yenye ye
Kukhululwe umdlali we-MPV 0.27
Kulungiselelwe abo bangenalo uvuyo lokwazi i-MPV, mandikuxelele ukuba ngumdlali wemultimedia kumgca wokuyalela, indawo yokuphindaphindeka esekwe ...